IFlibanserin Isiza Kanjani Owesifazane NjengeHormone Yezocansi
/Blog/Gallery/IFlibanserin Isiza Kanjani Owesifazane NjengeHormone Yezocansi
Posted on 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
Ukungasebenzi ngocansi kukholakala ukuthi kuvamile emadodeni, futhi kube nenhlanhla kubo; kunobubanzi bezindlela zokwelapha ongakhetha kuzo zonke ezivela eViagra, Cialis, nezidakamizwa ze-ED. Futhi banezindlela zokwelapha ama-hormone ukusiza ukubuyisela i-drive drive yabo yocansi. Abesifazane bazizwa belahliwe kulokhu. Ngenhlanhla, nazo zinokhetho. Akusadingeki balwe nezifiso ezilahlekile zocansi, inkinga eholele ekuchithekeni kobuhlobo obuningi. NgeFlibanserin (167933-07-5), banendlela yokukhulisa intshisekelo yezocansi.
I-Flibanserin (167933-07-5), ethengiswa ngaphansi kwegama Engeza umuthi osetshenziselwa ukwelashwa kwezinkinga ze-premenopausal kubantu besifazane, ikakhulukazi labo abane-hypoactive sexifiso disorder. Yisiphi isifiso sokuya ocansini esibuzwayo osibuzayo? Lesi yisimo esibonakaliswa izifiso zobulili eziphansi, okungaholela ebunzimeni obuphakathi kwabantu noma usizi. Le nkinga akufanele ibe njengomphumela wokuhlangana kwezinkinga zempilo noma izinkinga zobudlelwano. Futhi, akuyona inkinga eza ngenxa yomuthi noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Kufanele ukubone lokho Flibanserin ayenzelwe abesifazane esesivele sebefinyelele esikhathini sokuya esikhathini. Futhi, ayifanele amadoda. Lo muthi unikezwa ngaphansi kohlelo olukhethekile, okusho ukuthi umuntu kufanele abhaliswe kulolu hlelo ngaphambi kokuthola umuthi. Lolu hlelo lusiza abasebenzisi ukuthi bafunde izinzuzo nezingozi eziza nokusetshenziswa kwalo muthi, futhi ngale ndlela, bangakwazi ukwenza isinqumo esizwakalayo sokuthi kufanelekile yini kubo noma cha. Futhi, abasebenzisi kufanele bazi ukuthi lo muthi ngeke usetshenziswe njengento yokuthuthukisa ubulili. Esikhundleni salokho, senzelwe ukusiza labo abanezifiso zobulili ezincishisiwe ngaphandle kwesizathu esiyimbangela.
Ngabe uFlibanserin usebenza kanjani kwabesifazane?
Abesifazane abaningi bayangabaza ngokusebenzisa lo mkhiqizo futhi abanaso isiqiniseko sokuthi kufanele bawusebenzise noma cha. Isizathu ukuthi, besaba ukuthi kungenzeka kungasebenzi. Iqiniso ngukuthi, yize lo mkhiqizo usebenza, awusebenzisi wonke umuntu. Wonke umuntu uhlangabezana nakho ngokuhlukile, futhi ngoba ukusebenzele omunye umuntu akusho ukuthi kuzokusebenzela ngendlela efanayo. Kodwa-ke, i-60% yalabo abasebenzise lesi sidakamizwa banikeze izibuyekezo ezinhle futhi babika ukuthi umuthi unikeza imiphumela emihle.
Umbuzo omkhulu, nokho, ngukuthi; isebenza kanjani? Akukaze kube nokutholakale okucacile kumshini osetshenziswa ngalo muthi ukuthola imiphumela. Kodwa-ke, abacwaningi beze nombono, kulandela iqiniso lokuthi i-serotonin inecala lokuvimbela ubulili, futhi batholile ukuthi uFlibanserin (167933-07-5) kunciphisa umsebenzi we-serotonin ebuchosheni. Lokhu, ngokubuyisela, kubuyisa isifiso sowesifazane sowesifazane ngokocansi. Futhi, umuthi unomthelela othile ongaqondile ku-norepinephrine ne-dopamine, nayo exhunywe kwizifiso zocansi ezithuthukisiwe.
Ngokungafani neViagra neminye imithi ehlobene nokuya ocansini emadodeni, lesi sidakamizwa ikakhulukazi sisebenza ngokuqondisa ubuchopho. Kwenza lokho ngokwandisa amazinga ama-neurotransmitters esetshenziswa ingqondo yakho ukuvusa isifiso sobulili.
Ngokuvamile, isidakamizwa sidiliza izinkinobho ezimbili eziyinhloko zomqondo ezibhekene nokukhuthaza izifiso zobulili ngenkathi kuvimbela ama-neurotransmitters abhekele ukucindezela isifiso sobulili kwabesifazane. Lesi sidakamizwa sangeniswa emakethe emuva e-2015 ngemuva kokuthi i-FDA isigunyazisile ukwelashwa okutholakele I-HSDD kwabesifazane.
Noma kungekho mininingwane ecacile yokuthi hlobo luni lwabesifazane olungazuza kulo muthi, kuphephile ukusho ukuthi umuthi usetshenziselwa ukwelapha izifiso zobulili ezilahlekile ngokwemvelo. Lokhu kusho ukuthi kusebenza kuphela uma kungekho zindleko zangempela eziyisisekelo zezinto ezilahlekile zobulili, njengokulahleka kwenzalo ebudlelwaneni noma ngenxa yeminye imiphumela yezidakamizwa. Futhi, akusikho kulabo abaphatha imiphumela yokuya esikhathini. Umuthi uhlolwe kwabesifazane abane-HSDD. Abesifazane bonke babenobudlelwano obuzinzile besikhathi eside, okusho ukuthi inkinga yabo akubanga ngenxa yobudlelwano obungajabuli. Babenesifiso sobulili esikhathini esidlule futhi babekhathazekile ngokuthi kancane kancane bayawulahla futhi bafuna indlela yokubuyisa.
Laba besifazane babone lolu daba cishe iminyaka emihlanu, futhi bathi abanazo izifiso zobulili zabathandana babo noma omunye umuntu. Cishe i-50-60% yabesifazane baphendule kahle kulo muthi, kanti abanye basabela kabi. Abanye bathola isifiso sobulili sabanye abantu kunabalingani babo, ngakho-ke akukho mininingwane ecacile yokuthi umzimba wakho uzowuphendula kanjani umuthi.
Omunye umbuzo ovame ukubuzwa ngaphansi kokuthi umuthi usebenza kanjani ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukubona imiphumela. Futhi, lesi sici singase sehluke komunye umuntu kwesinye, ikakhulukazi ngoba sisebenza ngokuhlukile. Kodwa-ke, izivivinyo ziphakamisa ukuthi kuzothatha isikhathi esingamasonto amane ukubona imiphumela yokuqala kuze kufike emasontweni ayishumi nambili ukuthola imiphumela ephezulu. Wena, noma kunjalo, udinga ukuyisebenzisa kahle ukubona imiphumela.
Umthamo ophakanyisiwe ochwepheshe yi-100mg, okufanele ithathwe ngomlomo, kanye ngosuku. Kungcono uma kusetshenziswa ngesikhathi sokulala noma sokuphumula. Lokhu kungenxa yokuthi ukuthatha lo muthi ngesikhathi sokusebenza noma lapho umzimba wakho usebenza kukufaka engcupheni yokuthola i-syncope, ingcindezi yesistimu yezinzwa, i-hypotension, noma ungathola ingozi.
Kwenzekani uma uphuthelwa umthamo?
Uma uphuthelwa Flibanserin isilinganiso ngesikhathi sokulala, kunconywa ukuthi ulinde isikhathi sokulala esilandelayo ukuze uphathe umuthi.
Ukweqa lo muthi ngokweqile akusho ukuthi uzothola imiphumela esheshayo. Esikhundleni salokho, kuzokulethela imiphumela emibi kuphela. Kungakuhle ukuthi uma ngephutha udla ngokweqile noma usola ukuthi ukwenzile, funa usizo lwezempilo ngokushesha.
Ukuyeka nini ukusetshenziswa kwawo?
Kufanele uyeke ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ngemuva kokusebenzisa amasonto ayisishiyagalombili ngaphandle kokuthuthuka. Njengoba kushiwo ngaphambili, umuthi usebenza ngendlela ehlukile kubantu abahlukahlukene. Abanye bangaqala ukubona imiphumela ngokushesha, kanti abanye kungathatha isikhathi. Kodwa-ke, akufanele kukuthathe ngaphezu kwamaviki ayisishiyagalombili ukuzwa ngcono okungatheni. Uma lokho kwenzeka, kukhombisa ukuthi umkhiqizo awulungile kuwe, futhi kungcono kakhulu uma uyeka ukusetshenziswa kwawo.
Ngokuya ngesimo, ungaguqula umthamo wakho ukuze ulinganise noma uqine ngokusekelwe ku-CYP3A4 inhibitors. Kuyancomeka ukuthi uma wethula ukusetshenziswa kweFlibanserin ngokusezingeni elifanele noma eliqinile I-CYP3A4 inhibitor, bese kufanele uqale ngemuva kwamaviki amabili ukusuka kumthamo wokugcina we-CYP3A4 inhibitor. Uma ufuna ukushintsha i-CYP3A4 inhibitor njengokusebenzisa ngakunye kweFCIBANSERI, kufanele ukwenze ezinsukwini ezimbili ngemuva komthamo wangaphambilini weFlibanserin.
Kufanele uqaphele ukuthi lesi sidakamizwa silungele labo abane-HSSD abayitholile, okusho ukuthi le nkinga ivela kubantu ababengenazinkinga zempilo. Futhi, inkinga akufanele ibe ngomphumela wezinye izinto noma ngenxa yokuya esikhathini. Uma une-HSDD kungakhathalekile ukuthi yisiphi isimo, umlingani, noma ukukhuthaza, lo mkhiqizo ukuphi. Uma ulahlekelwe izifiso zobulili mhlawumbe ngoba ucindezelekile, ubusematasa nomsebenzi, noma ungasahambisani kahle nomlingani wakho, lo muthi akuyona into oyidingayo ukuxazulula izinkinga zakho. Akuhloselwe ukukhulisa ukusebenza kocansi, kodwa esikhundleni salokho, kwenzelwa ukuvusa ama-hormone ocansi. Futhi, akufanele isetshenziswe ngabesilisa.
Imiphi imiphumela emibi yokusebenzisa iFlibanserin?
Yonke into enenzuzo inemiphumela emibi nayo. Okusemqoka Inzuzo yeFlibanserin ukuthi ihlinzeka ngesithuthukisi esibonakalayo ku-sex drive. Isebenza ngokuphelele njengendlela yokwelashwa kwe-HSDD ngalo lonke ucwaningo lwesayensi kanye nokuhlolwa kwe-anecdotal okubonisa ukuthi kuphumela ekukhuliseni isifiso sobulili nentshisekelo. Noma kunjalo, umuthi awusebenzi njalo, futhi kufanele uwusebenzise ngomqondo ovulekile. Umuthi awuhloselwe ukwelashwa kwesifiso esilahlekile sobulili ngenxa yomuthi okhona noma okunye ukulinganiselwa kwempilo noma komzimba. Futhi, ngeke kube wusizo uma njengamanje usebenzisa ezinye izindondo ezingathinta isifiso sakho sobulili, njenge-antidepressant. Udinga ukuthi udokotela wakho akuhlole kuqala ukuze ubone ukuthi ukulungele yini ukusebenzisa lo muthi nokuthi uzokusebenzela yini.
Akufanele usebenzise lo muthi uma unezinkinga zempilo eziyisisekelo ezifana nesifo senhliziyo, umfutho wegazi, noma isifo sikashukela. Kufanele uvumele udokotela wakho ukuthi akusize ukuphatha izindaba kuqala ngaphambi kokusebenzisa umuthi.
Ngaphambi kokuvunyelwa ukusetshenziswa, izidakamizwa kufanele zihlolwe yi-FDA ukuthola ukuthi kuphephile yini ukusetshenziswa. Kodwa-ke, i-ADDYI phakathi kwalezo zidakamizwa ezingakaze zinqunywe ngokuphelele ukuthi ziphephile ukusetshenziswa. Umuthi ubonakale ulusizo olukhulu ekwandiseni iLibido nokusiza labo besifazane abanezifiso zobulili ezilahlekile. Kutholakale ukuthi kunosizo lwezinzuzo nanjengesigcini esikhulu sobudlelwano. Kodwa-ke, i-FDA ithole ukuthi umuthi uqhamuka neminye imiphumela emibi, konke kusuka kusiyezi, ukulala, kanye nenausea. Lezo ezijwayelekile Imiphumela emibi yeFlibanserin, kepha i-FDA ibikhathazekile ngemiphumela emibi emibili abantu okufanele bakhathazeke ngayo okuyiyona;
Uma sisetshenziswe kabi, lesi sidakamizwa sinemiphumela yokudlubulunda, futhi abanye abantu basisebenzisa ngezizathu ezingalungile njengoba bezama ukulala ubuthongo obunengqondo. Uma lokhu kwenzeka, abasebenzisi balala amahora amaningi kunokufanele. Lokhu, futhi, kuthinta umkhiqizo wabo ikakhulukazi ngenxa yokuntuleka kokugxilisa ingqondo nokulala ngezikhathi ezingafanele.
Ukwehluleka ngenxa yokwehla kwengcindezi yegazi
Lokhu kungumphumela oyingozi oyingozi kakhulu, futhi kwenzeka kakhulu lapho umuthi usetshenziswa ngesikhathi esingafanele. Njengoba kushiwo ngaphambili, umuthi kufanele usetshenziswe ngesikhathi sokulala noma sokuphumula. Ukuphatha umuthi ngesikhathi sokuvuka noma lapho umzimba wakho usebenza imiphumela yokwehla kwengcindezi yegazi futhi kungakwenza uphelelwe amandla.
YINI IZEXWAYISO ZEFlibanserin?
Lapho uphathwa ngotshwala, lo muthi ungaholela ekwehlelweni okuphezulu kokucindezela kwegazi, okuholela enesiyezi, ukukhathala, nokuqina, futhi ungahle uphele amandla ngenxa yale miphumela emibi. Kuyanconywa ukuthi uma uqala ukusebenzisa iFlibanserin, kufanele uyeke ukuphuza utshwala. Ngisho inani elincane kakhulu lotshwala lingaholela emiphumeleni emibi eshiwo.
I-contraindicated ene-inhibitors ye-CYP3A4 eqondile noma eqinile
Uma isetshenziswa ngama-inhibitors ama-YP3A4 aqinile noma alinganiselayo, kungenzeka ukuthi uzwe nenkuthazo ekhuphukayo yeFlibanserin, ezoba njengokudlulela ngokweqile. Lokhu kuzokwenza futhi uzwa imiphumela emibi yokusebenzisa ngokweqile lento. Ngalokhu, kufanele uqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwalawa ma-inhibitors kuyaphulwa, okusho ukuthi kufanele uwusebenzise kuphela uma uphoqelelwa yizimo.
Contraindicated ezigulini ezine -ibindi impairment
Umuthi awululeki kubantu abanokulimazeka kwesibindi ngaphandle kosizo lochwepheshe bezokwelapha. Kuyancomeka ukuthi ufune izeluleko kudokotela ozokusiza ukuphatha ukulimala kwesibindi sakho ngaphambi kokuqala ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa. Ucwaningo luveze ukuthi iFlibanserin (167933-07-5) yanda ukubonakala kulabo abanokulimala kwesibindi uma kuqhathaniswa nalabo abanesibindi esisebenza kahle, esiveza ukuthi bangaba sengozini enkulu yokuthola i-syncope, hypotension, kanye ne-central system immune system.
Azikho izifundo ezicacile ezikhomba ukuthi ngabe lo mkhiqizo ubeka noma yiziphi izingozi kubesifazane abakhulelwe noma abancelile. Ngokuyahlolwa okwenziwe ezilwaneni, kukhombisa ukuthi ubuthi buvela kuphela lapho kukhona ubuthi bomama. Eminye imiphumela ngesikhathi leso ifaka ukuzuza isisindo, ukulala kanye nesiyezi. Izilwane zilala kakhulu kunokwejwayelekile. Ezinye zezilwane zathola imiphumela yokuzala nentuthuko, kufaka phakathi ukungalingani okuhlelekile kanye nokuncipha kwesisindo.
Kusazonqunywa uma iFlibanserin powder (167933-07-5) ineminye imiphumela ekusatshalaliswa kobisi lwebele lomuntu, futhi akaziwa ukuthi unawo yini umthelela ezinganeni ezisancelwayo. Ucwaningo olwenziwe kumagundane lukhombisa ukuthi lesi sidakamizwa sakhishwa kubisi lwerandi. Nalokhu, kuphephile ukusho ukuthi ukusetshenziswa kweFlibanserin lapho ukhulelwe noma ukuncelisa ibanga imiphumela emibi kwabesifazane abancelisayo enjenge-sedation, futhi lokhu kungathinta nezinsana ezincelisiwe.
Flibanserin wehlise isisindo
Ngokusho kocwaningo oluthile kanye nokuhlaziywa kwe-post hoc, abesifazane be-postmenopausal kanye nabesifazane be-premenopausal ababesebenzisa lesi sidakamizwa i-hypoactive Ubulili ukuphazamiseka kwesifiso kungenzeka kunciphise isisindo. Ake sibhekane nakho. Abesifazane abaningi bayazi ngesisindo sabo futhi bayesaba ukusebenzisa noma yini ezothinta kabi isisindo sabo. Kungumuzwa oqinisekisayo ukwazi ukuthi ukusebenzisa iFLIBASERIN akunamphumela wokuzuza isisindo kubantu, kepha kunalokho kuyabasiza bachithe isisindo esikhulu. Uma ubukade unenkinga yezinkinga zesisindo futhi ufuna indlela engenamandla yokuzikhipha, lo muthi ungaphezulu.
Ucwaningo olwenziwe ngalokhu lwenzelwe ukuqinisekisa abesifazane, kepha baphephile njengoba iningi labo lingabaza ukuthatha lo muthi. Ama-antidepressant amaningi aziwa ukuthi abangela ukukhuluphala kwesisindo, futhi abesifazane besaba ukuthi lokhu kwelashwa kuzoba nemiphumela efanayo.
Le nkinga ivele ekutheni lesi sidakamizwa siyi-receptor encane ye-5-HT2C i-agonist ihlanganiswa kakhulu nokuncipha kwesisindo, njengoba ivunyelwe yi-FDA ngalokhu futhi iqiniso lokuthi iFlibanserin incane yanikeza abesifazane umbono wokuthi izowubangela ukuthola isisindo.
Ukuphela kwendlela yokujabulela imiphumela emihle uma thenga iFlibanserin kumthengisi othembekile Ngokunyuka kwesidingo salo mkhiqizo, kuye kwaba nokukhuphuka kwabathengisi abathi banikela ngekhwalithi enhle kakhulu yeFlibanserin. Ngenkathi abanye beba nentshisekelo yakho enhle enhliziyweni, abanye bangemva kokukhalimela abathengi abantulayo. Ufuna ukuqinisekisa ukuthi uthola umkhiqizo kumhlinzeki ongamethemba ngokuphelele. Ungathola I-Flibanserin powder lapho wenza khona isixazululo ngaphambi kokusisebenzisa ngomlomo. Thatha isikhathi sakho, cwaninga kahle ukuze uthole okulungile I-Flibanserin iyathengiswa. Izidakamizwa zingumkhiqizo ozwelayo, futhi ukuthola okungalungile kungenza isimo sakho sibe sibi kakhulu kunendlela esivele injalo.
UFlibanserin usefakazele ukuthi uyikhambi elihle kwabesifazane abalahlekelwe isifiso sobulili ngaphandle kwesizathu esiyimbangela. Kodwa-ke, kufanele uthole ikhwalithi enhle kakhulu yalo mkhiqizo futhi uwusebenzise ngendlela efanele ukubona imiphumela. Futhi, kufanele ulisebenzise ngomqondo ovulekile futhi uqaphele ukuthi kungenzeka lungasebenzi kuwe njengoba lisebenzele omunye umuntu. Ungakhohlwa ukuthola izeluleko zobudokotela ngaphambi kokuqala ukusetshenziswa kwaso ukuthola ukuthi ungumele ukhetho.
UJane McCall, i-Female Viagra Flibanserin: Umhlahlandlela Ophelele Wokwelashwa kwe-Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) kanye Nokwanda kwe-Female Libido Ukufinyelela I-Intense Orgasm futhi Kuqede Umuzwa Wosizi; I-1724181459
I-Amazon Digital Services LLC - I-Kdp Print Us, i-2018, i-Pink Viagra (Flibanserin): Umhlahlandlela Wencwadi ngePilisi Lokuthuthukisa Abesilisa Abesifazane Elikhulisa IDrayivu Yezocansi futhi Lisize Abesifazane Ukufeza Izitho Eziningi, 1729471161
UBorsini F, u-Evans K, uJason K, uRohde F, u-Alexander B, uPollentier S (2002). "Ikhemisi ye-flibanserin". Ukubuyekezwa Kwezidakamizwa ze-CNS. 8 (2): 117-42.
Konke mayelana ne-Oxandrolone (Anavar), udinga ukwazi I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza kanjani abakhi bomzimba